Umnotho wakuleli wakhiwe ngaphansi kwesisekelo sengcindezelo | News24
Umnotho wakuleli wakhiwe ngaphansi kwesisekelo sengcindezelo
Durban -Lawa ngamazwi kaNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba ngesikhathi ethula inkulumo yakhe esifundweni senqubomngomo yezomnotho esihlelwe wuphiko lwentsha ku-ANC kwaZulu-Natal.
UGigaba uthe ukungalingani kwabantu emphakathi wuphawu lokuthi izwe alikaphumi kwingcindezelo yezomnotho, kubika i-The Citizen.
“Ngo-1993 savumelana ngokuthi amandla azokwabelwa namaqembu afana ne-National Party kanye neNkathi Freedom Party ukuze nawo abambe iqhaza elibalulekile kuhulumeni omusha,”kusho uGigaba kulesi sifundo ebesibanjwele ePinetown.
“Kwavunyelwana ngokuthi abaqhubeka nokuba nombono kwezomnotho. UKhongolose wazigcina lezo zethembiso kodwa manje sekufike isikhathi soshintsho. Lesi sekuyisikhathi sokuthi sizibeke thina kuqala,”kuqhubeka uGigaba.
OLUNYE UDABA:Ukukhishwa kwaZuma kuzokhulisa umnotho – Pityana
Lo Ngqongqoshe uthe umnotho uphethwe ngabantu abayingcosana futhi lokhu kubonakala nangenqwaba yezinkampani eziphethwe ngabantu abambalwa futhi yibona labo bantu abagcina bezuza kakhulu ngezinhlelo zezomnotho.
“Lokhu kusho ukuthi umnotho wethu usakhiwe ngaphezu kwesisekelo sengcindezelo, kusukela kuhulumeni wonxiwankulu.
“Uma sifuna ukuguqula umnotho wethu kumele sizibuze ukuthi yiziphi izinyathelo okumele sizithathe ukuze sizuze inkululeko kwezomnotho,”kusho uGigaba.
UGigaba uqhubeke wathi zincane izinkampani zabansundu esikhungweni i-JSE, lezi zinkampani zingaphansi kwamaphesenti amahlanu.
“Angikuvezi lokhu ngoba ngifuna ukunicasula, kodwa ngizama ukunibonisa ukuthi asilingani,”kuqhubeka yena.